Dagaalkii saaka ka dhacay Buulo Guduud iyo Khasaare xooggan oo ka dhashay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Dagaalkii saaka ka dhacay Buulo Guduud iyo Khasaare xooggan oo ka dhashay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 3rd September 2017
Ku dhowaad afartan askari oo ka mid ahaa Ciidamadii Juballand ee ku sugnaa Buula-gaduud ee duleedka magaalada Kismaayo ayaa la soo sheegayaa inay ku dhinteen in ka badan konton kalena ku dhaawacmeen weerar culus oo saaka waaberigii Al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ku lahaayeen degaankaas sida ay sheegayaan wararka halkaas ka imnanaya.
Weerarkan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay albaabka xerada ciidanka Jubbaland ee Degaanka Buula-gaduud ayaa waxaa xigaydagaal toos ah oo boqolaal dagaalyahan ku qaadeen Buulo guduud.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ayaa qirtay in weerarka ka dhacay Buula-gaduud looga dilay askar badan oo aysan tiradooda sheegin, waxayna intaa ku dareen iney dib ula wareegeen degaanka Buula-gaduud oo muddo saacado ay haysteen Al-shabaab.
Sidoo kale Goobjoogeyaal ayaa sheegay in illaa Saddex Gaari ay Shabaab dagaalkaas ku qabsadeen, kuwaasoo kala ahaa Booyad, Gaari Xamuul ah iyo mid Dagaal.
War ay soo saartay Al-Shabaab oo lagu daabacay bogaga taageera ayey ku sheegeen iney dagaalkaas kula wareegeen degaanka Buulo guduud iyo xeryihii ay degenaayeen ciidamada Juballand ee halkaas ku yiilay in ka badan 30 askari halkaas ku laayeen.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa sheegtay iney saddex gaari ku qabsadeen dagaalkaas ayna la wareegeen Bakhaaro Hub ah Keydad shidaal iyo raashin ay lahaayeen ciidamada Jubballand.
Dhanka kale, Ciidamo ka soo baxay magaalada Kismaayo oo doonayey iney u gurmadaan ciidanka lagu weeraray Buulo guduud ayaa Qaraxyo lagula beegsaday inta u dhaxeysa Buula-gaduud iyo Kismaayo, waxaana la sheegay in afar Askari oo ka mida Ciidamada Jubballand ee qaraxyada loo dhigay ay ku dhinteen.